Shiinaha Customized bacda suunka soo saareyaasha, shirkado cusub, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Bacda dhexda > Bacda suunka haweenka
1. Bacda suunka haweenka product introduction:
(1) Boorsadan suunku waa khasnad dhab ah oo loogu tala galay dadka waaweyn iyo kuwa yaryarba. Waxay leedahay naqshad gebi ahaanba u gaar ah waxaana loo isticmaali karaa bacda dhambaalka ama kiishka dhexda. Bacda suunku waxay leedahay qori jeexan iyo jeebka hore si dhakhso loogu helo iyo jeeb gudaha ah. Dhererka suunka ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahidaada (waa la habeyn karaa). Waxaa laga sameeyaa maqaar gurguur ah oo matte ah waxaana lagu heli karaa midabbo kala duwan. Naqshadeynta fudud iyo qalabka ugu tayada sarreeya ayaa bacdan suunka ka dhigaya mid gaar ah.
(2) Boorsadan suumanka dumarka ah waa mid aad u qurux badan oo si wanaagsan loo qaabeeyey.
(3) Tayo fiican oo layaab leh, runtii ma jiraan ereyo lagu tilmaamo sida ay u layaabka badan yihiin.
(4) Siibadu si habsami leh ayey u socotaa. Suunka ayaa ku filan in jirka la iskutallaabto.
2. Bacda suunka haweenka product parameters (specifications)
4. Baakadaha suumanka ee haweenka iyo soo-bixinta
Calaamadaha kulul: Bacda suunka Mudanayaal, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka